Mooshin ka dhan Ra’iisul wasaare DFS Saacid oo ka socda Magaalada Muqdisho
Muqdisho:-Xildhibaan ka trisan Golaha Baarlamaanka dowlada Federaalka Soomaaliya oo kulan ku yeesheen magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay gudbiyeen mooshin ka dhan ah Xukuumada uu hogaamiyo Ra’iisul Wasaare Saacid, waxaana mooshinkaan gudbiyey Xildhibaan gaaraya ilaa 97 iyadoo dib loogu balamay 22 bisha May.
Shirka maanta ay iskugu yimaadeen Xildhibaan Golaha baarlamaanka ee Dowllada Federaalka Soomaaliya ayaa waxaa shir gudoominayey gudoomiyaha Baarlamaanka DFS Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari.
Kulanka ayaa maanta waxaa soo xaadiray ilaa 149 Xildhibaan oo ka tirsan Golaha Dowllada Federaal ka Soomaaliya, waxaan ay warbixin ka dhagaysteen gudoomiyaha Baarlamaanka DFS Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari isagoo uga warbixiyey safaro kale duwan oo dalka dibadiisa uu ku tegay gaar ahaan dalka Turkiga.
Gudoomiyaha Baarlamaanka DFS Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari ayaa uga warbixiyey safarkiisa Xildhibaanada waxaan warbixinta ka dib uu ugu baaq Xildhibaanada in si deg deg ah loo soo buuxiyo boosaskii ay baneeyeen Xildhibaan Bashiir Maxamed Jaamac Goobe oo loo magacaabay Taliyaha ciidanka Nabad sigida DFS iyo Prof Axmed Ismaaciil Samatar oo iska casilay xilka Xildhibaanimo ee dowllada Federaalka Soomaaliya.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa isbuucaan si xowli ah uga socda Mooshin ka dhan ah Raisulwasaaraha DFS Cabdi Faarax Shirdoon Saacid waxaana mooshinkaas ka digay Maamulka Puntland.Galmudug ,iyo siyaasiyiin kala duwan .